FAQs - Hunan Jiayi Import and Export Co., LTD
Inona no atao amin'ny ahitra sentetika?
Tizy kosa tena maintso ahitra sentetika dia misy akora polyethylene, karazana plastika mahazatra izay hita ao anaty entana toy ny tavoahangy sy harona plastika. Ny sosona ahitra amin'ny ahitra sentetika dia vita amin'ny polypropylene, polyethylene, na nylon fitaovana
Inona no loko tokony hampiasaiko?
Tny ahitra dia tsy maitso mavana foana… mety ho mavokely, manga, mainty, mainty na volontany
Whether ianao dia te hisafidy TURF INTL ara-barotra na bozaka artifisialin'ny trano, mitovy ny fizotran'ny loko, manome loko santionany izahay mba hahafahan'ny mpanjifa tsirairay misafidy ny lokon'ny tiany.
Inona no azo atao amin'ny fofona biby?
Manolotra rafitra fampidirana biby fiompy manokana ho an'ny mpanjifa miahiahy momba ny fofona biby rehefa mametraka turf artifisialy
Inona no atao hoe infill?
Ao amin'ny tontolon'ny turf, misy karazana infill isan-karazany ary samy manana tanjona hafa ny tsirairay. Ary ny infill dia sosona iray misy fasika ampiasaina eo ambonin'ny turf eo anelanelan'ny fibre.
Ahoana no fiantraikan'ny toetrandro amin'ny ahitra sentetika?
SAhitra ahitra dia matetika hita any amin'ny faritra misy toetrandro tafahoatra satria faritra maharitra kokoa izay hitazomana faharetana ary tsy mila fikolokoloana tsy tapaka. Marina indrindra izany amin'ny faritra varotra na toeram-ponenana izay maniry ny fisehoana 'manicured' tadiavina. Ho fanampin'izay, raha mafana be ny andro, dia hamafa ny ahitra ao anaty segondra vitsy monja ny tsifotra rano tsotra
Mety amin'ny tontolo iainana ve ny ahitra sentetika?
Absolute! Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny tontolo iainana:
a) Mitsitsy rano amin'ny alàlan'ny fanesorana ny filàna famafazana rano.
b) Rmanabe ireo loto tsy mila zezika.
c) Rmanabe ny fahalotoan'ny rivotra rehefa tsy takiana ny fanapahana bozaka.
Inona no androm-piainan'ny ahitra sentetika?
TURF INTL dia manolotra mpanamboatra 15 taona sy antoka fiasana 3 taona ho an'ny mpanjifa noho ny ahitra sy ny bozaka artifisialy
Hunan Jiayi Import and Export Co., LTD dia napetraka ao Changsha ho foibe famokarana sy varotra, tambajotram-panompoana manerantany. Mamboly vondrona manam-pahaizana matihanina miaraka amina ekipa mpivarotra. Tafiditra lalina amin'ny dinika alohan'ny varotra, ny drafitra, ny fanarahana ny fandrosoana, ny fifehezana ny kalitao, ny fandaharam-pananganana sns.
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap, Turf artifisialy fanatanjahan-tena, Turf artifisialy volondavenona, Flooring Gym vita amin'ny fingotra matevina, Synthetic Turf Pros, Sehatra ara-panatanjahantena Turf artifisialy, Baseball Field Grass, Vokatra rehetra